Ultra Soft Microfiber Stripes Qaabka jiifka fidinta HF29031, Shiinaha Ultra Soft Microfiber Stripes Qaabka fidinta HF29031 Soosaarayaasha, Shirkado, Warshad - Zhejiang Rancho Santa Fe home textile Co., Ltd
Number Model: HF29031
QAAB LACAG LEH & TAYO BADAN - Bedspread wuxuu ka kooban yahay waxyaabo badda ka mid ah, iyadoo la adeegsanayo noocyo kala duwan oo buluug ah si loogu daro qodobo qarsoodi ah qolka oo ka dhigaya qolku mid wanaagsan oo indhaha qabanaya. si fudud loo daryeelo mishiinkana loo dhaqo. Sariirta gogosha ayaa loo isticmaali karaa maalin kasta ama munaasabad gaar ah. Tolmada qurxinta ee qurxinta waxay ku dareysaa dadaal aan caadi aheyn, isla markiiba. Qalabkan gogosha leh ee tayada sare leh ayaa ah lahjadda ugu habboon qolka jiifka ama qolka martida.
QAADASHADA JIMCAHA QARXISKA JIMCAHA & MIDOOYINKA & SHAQOOYINKA - Khibrad u yeelo raaxada ugu badan iyo hurdada raaxada leh ururintayada cajiibka ah ee qaab joomatari gogosha gogosha leh. Waxay leedahay muuqaal hoose, muuqaal isku mid ah halka qolka loo keenayo shey faahfaahsan oo casri ah..Barbaarta sariirta waa iftiin ku filan in loo isticmaalo cimilada diiran, laakiin sidoo kale waxay haysaa mid u gaar ah habeen qabow.
DHAQAN DHEERAAD AH FINISH
NISKA QAADASHADA INDHAHA
Warqaddan-warbixineed aad ayey u fududahay in la daryeelo. Waa Mashiinka lagu dhaqi karo biyo qabow oo leh midabbo isku mid ah. Ku qalal kuleylka yar. Ha ku caddeynin wax caddeyn ah - Ma Dhimi karo - Ma Yareeyso !! Waxaa loo dhisay si aad u dheereeya haddii si sax ah loo ilaaliyo.Mid jilicsan, jilicsan 100% microfiber oo leh suuf khafiif ah laakiin cufan leh, sariirta sariirta waa iftiin ku filan in loo isticmaalo cimilada diiran laakiin sidoo kale iyada ayaa iska leh habeen qabow.
Faux linen Fresh Green Splicing 8208 Daahyada Madadaalada